Su'aalaha La Weydiiyo - Shanghai Yangli Qalabka Qalabka Qalabka Co., Ltd.
1. Ma waxaad ka ganacsataa shirkad ama wax soosaar?
Waxaan nahay xirfadle soo saaraha qalabka guryaha ilaa 1999.
Fadlan noo soo dir amarka iibsigaaga Email ama Fakis, ama waad na weydiin kartaa inaan kuu soo dirno Performa Invoice si aad u dalbato. Waxaan u baahanahay inaan ogaano macluumaadka soo socda ee amarkaaga:
1) Macluumaadka badeecada: Tirada, qeexida (cabirka, maaddada, midabka, astaanta iyo shuruudaha xirxirashada), Farshaxanka ama Sample ayaa ugufiican.
2) Waqtiga dirida oo loo baahan yahay.
3) Macluumaadka rarida: Magaca shirkada, Cinwaanka, Lambarka taleefanka, Hoolka dekedda / garoonka diyaaradaha.
4) Faahfaahinta xiriiriyaha gudbiyaha haddii ay wax ka jiraan Shiinaha.
3. Maxay tahay geedi socodka oo dhan ee ganacsi nala sameynta?
1. Marka hore, fadlan bixi faahfaahinta alaabada aad u baahan tahay oo aan kuu soo qaadanno.
2. Haddii qiimaha la aqbali karo oo macmiilku u baahan yahay muunad, waxaan u siineynaa Performa Invoice macaamilka si uu ugu habeeyo lacag bixinta saamiga.
3. Haddii macmiilku oggolaado muunadda oo uu dalbado amar, waxaan siin doonnaa Performa Invoice macmiilka, waxaanan diyaarin doonnaa inaan soo saarno hal mar markaan helno 30% dhigaal.
4. Waxaan u soo diri doonnaa sawirrada dhammaan badeecadaha, xirxirida, faahfaahinta, iyo nuqulka B / L ee macmiilka marka alaabtu dhammaato. Waxaan diyaarin doonaa shixnad oo aan bixin doonnaa B / L asalka ah marka macaamiisha ay bixiyaan dheelitirka.
4. Astaanta ama magaca shirkada in lagu daabici karo alaabada ama xirmada?
Hubaal. Astaamahaaga ama magaca shirkaddaada ayaa lagu daabacan karaa alaabadaada adoo shaambad ku daabacaya, daabacaya, ama ku dhejinaya. Laakiin MOQ waa inay ahaataa bogag xambaarsan kubbado ka sarreeya 5000 nooc; qarsoodi qarsoodi ah oo ka sarreysa 2000 nooc; laba jibaar khaanadaha gidaarka korkiisa 1000; Qalabka foornada oo ka sarreeya xirmooyinka 10000; fiilooyinka golaha wasiirada oo ka sarreeya 10000 kumbiyuutar iwm
5. Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
Bixinta <= 1000USD, 100% ka hor. Bixinta> = 5000USD, 30% T / T ka hor, dheelitir ka hor shixnad.
Haddii aad hayso su'aal kale, fadlan si xor ah ula soo xiriir E-maylka: yangli@yangli-sh.com.
6. Faa'iidooyin noocee ah ayaan leenahay?
1. QC adag:Amar kasta, kormeer adag ayaa lagu qaadi doonaa waaxda QC ka hor inta aan la rarin. Tayada xun ayaa looga fogaan doonaa albaabka gudahiisa.
2. Shixnad: Waxaan leenahay waaxda xamuulka iyo soo gudbiyaha, markaa waxaan ballan qaadi karnaa inaan si dhaqso leh u gaarsiinno alaabta si wanaagsan loo ilaaliyo.
3. Wax soosaarkayaga xirfadeed ee warshaddu waxay qariyeen bogagga khaanadaha, bogagga sida loo soo qaado kubbadaha, miisaska loo soo laabo miisaska iyo foorarka foornada illaa 1999.
7. Muxuu jilitaanka xiritaanka jilicsan si sax ah u shaqeyn waayey?
Sababta keentay jilicsanaanta xiritaanka jilicsanaanta badanaa waxay ka dhalataa arrimaha soo socda inta lagu jiro rakibidda, fadlan kormeer sida ku xusan habraacyada soo socda:
(1) Hubi Meesha Dhinac (Nadiifinta).
Marka hore hubi meesha bannaan ee u dhexeysa golaha wasiirada iyo khaanadda oo ku jirta dulqaadka. Fadlan tixraac tilmaamaha ku habboon sheyga (nadiifinta) tilmaamaha ku saabsan Alaabta guriga, bogga ku habboon qalabka jikada. Fadlan la xiriir golaha sameeyaha haddii booska dhinaca golaha (nadiifinta) uu 1mm ka weyn yahay dulqaadka loo qoondeeyey.
(2) Kormeer saxnimada dhismaha golaha wasiirada iyo khaanadda.
Haddii dulqaadka macquulka ah ee meesha bannaan (nadiifinta) ay ku jirto 1mm, fadlan raac tilmaamaha cillad bixinta si loo sameeyo kormeerka golaha si loo hubiyo in golaha wasiirradu ay dhisaan saxnaanta golaha wasiirrada. Kabadhka iyo khaanadda waa inay ahaadaan qaab laba jibbaaran iyo qaab afar gees leh. Haddii khaanadda ama golaha wasiiradu aysan is barbar dhigin ama uu u eg yahay qaab dheeman, waxay saameyn ku yeelan doontaa shaqeynta slide-ka xiridda jilicsan.
(3) Hubi rakibaadda dhalada dhalada
Si loo sii daayo khaanadda iyo golaha wasiirada, riix tabka sii deynta xubinta gudaha oo soo jiid khaanadda si ay u go'do. Hubso in xubinta dhexe iyo tan sare isbarbar yaalliin oo siman yihiin, iyo in xubinta gudaha ka soo horjeedda khaanadda hore ee guddiga si fiican loo simay. Faahfaahinta rakibaadda iskiis u jiidaya waxay saameyn ku yeelan doontaa shaqeynta bogagga. Haddii golahaaga wasiirada ay buuxiyaan dhammaan shuruudaha kor ku xusan, oo dhibaatooyinka weli jira, fadlan haka waaban inaad nala soo xiriirto, oo khabiir ayaa loo xilsaari doonaa inuu ku caawiyo
Golaha wasiirradu wuxuu u hoggaansamayaa shuruudaha kor ku xusan laakiin wali si habsami leh ayuu ugu shaqeeyaa, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho gargaar xirfadeed oo dheeraad ah.
8. Maxay tahay sababta riixitaanka boodhka furan uu u leeyahay masaafad gaaban oo ejection ah, ama uusan awood u lahayn inuu qabto shaqada riixitaanka furan?
Bootada Furan ee 'Push Open Slide' ma shaqeyn doonto si sax ah haddii dhinaca bannaan (nadiifinta) ay ka baxsan tahay dulqaadka la tilmaamay. Fadlan tixraac macluumaadka sheyga ee Bogga Qalabka Qalabka Jikada.
9. Sideen u xaliyaa buuqa qulqulka riixitaanka furan?
Jeegga hore ee xubinta dhexe iyo kan dibedda ayaa lagu rakibay oo lala simay gidaarka golaha wasiirada. Marka istish-haadka uusan si sax ah u rakibnayn, buuqa wuxuu ka dhalan karaa faragelinta farsamada, sidaas darteedna u gaabinaysa masaafada masaafada sibidhka.